05 / 05 / 2021 05 / 05 / 2021 Jack Yates 851 Views စာ0မှတ်ချက် 10280 ပန်းပန်းစည်း, 10281 Bonsai သစ်ပင်, ပရဒိသု၏ 10289 ငှက်, ရုက္ခဗေဒစုဆောင်းမှု, Lego, Lego ရုက္ခဗေဒစုဆောင်းမှု, LEGO.com, တရားဝင်ပုံများ, အွန်လိုင်းတရားဝင် LEGO ဆိုင်
၏အကြီးမားဆုံး Lego Botanical Collection သည်ယခုအခါတရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးတွင်စာရင်းဝင်ပြီးတရားဝင်ပုံများကိုကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးကြည့်ရှုနိုင်သည် 10289 ပရဒိသု၏ငှက်.
10289 ပရဒိသု၏ငှက် ပေါ်သို့ပွင့်ခဲ့သည် LEGO.com ရှေ့ဆက်၎င်း၏ဇွန်လ 1 လွှတ်ပေးရန်။ ဤစာရင်းသည်ထုတ်ကုန်အတွက်ကြိုတင်မှာယူမှုများမရှိခြင်းကိုအတည်ပြုနိုင်သကဲ့သို့၎င်းသည်အိမ်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိပုံကိုဖော်ပြသည့်တရားဝင်ပုံများပြခန်းတစ်ခုပါ ၀ င်သည်။
အဆိုပါပုံစံသည်ရုက္ခဗေဒစုဆောင်းမှုတွင်အကြီးမားဆုံးတည်ဆောက်မှုဖြစ်မည်၊ အကွာအဝေးရှိအခြားအရစ်ကျများ၏ကုန်ကျစရိတ်နှစ်ဆဖြစ်သည်။ 10280 ပန်းပန်းစည်း နှင့် 10281 Bonsai သစ်ပင်။ သို့သော်၎င်းသည်ပထမဆုံးဖြစ်သည် Lego ဖော်ပြချက်အရယိမ်းယိုင်ခြင်းသည်အရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်သည်။
စာသားပေါ်တွင် LEGO.com အလင်းကိုလေပြေထဲသို့ထည့်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်မော်ဒယ်သည်အစစ်အမှန်စက်ရုံတစ်ခုကဲ့သို့ယိမ်းယိုင်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ပိုမိုတွေ့ရှိနိုင်သည် In-depth ပြန်လည်သုံးသပ်.
အခြားနောက်ဆုံးပေါ် 18+ အစုများအတွက်စာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ ၁၀၁၈၉ Taj Mahalဒါပေမယ့်အဲ့ဒီ့ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ကိုမင်းတို့အသိပေးလိမ့်မယ် LEGO.com အရမ်း။ တစ်ခုခုကိုလမ်း, သင်မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ် 10289 ပရဒိသု၏ငှက် အခြားအစုနှစ်ခုကျန်ရှိနေဆဲလာမည့်လတွင်ဖြန့်ချိရန် စတော့ရှယ်ယာထဲက ဒေသများစွာ၌တည်၏။
← ကျွန်ုပ်တို့၏ LEGO ပုံပြင်များတွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူပရိသတ်များ၏လွှမ်းမိုးမှုကိုစစ်ဆေးသည် LEGO Group
မြင် Spider-Man နှင့် Ghost Rider ဒီ Lego အတွက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား Marvel တည်ဆောက် →